Vazhinji vashandisi vanogunun'una nezve yakaderera kuita, kunonoka uye matambudziko ebhatiri neIOS 11 | IPhone nhau
Semazuva ese, nguva dzese Apple painotanga vhezheni nyowani yesystem yayo yekushandisa nharembozha, vashandisi vanotanga kuratidza kusagadzikana kwavo nekutadza kushanda kunoitwa nemidziyo yavo, kungave nekuda kwe hupenyu hwebhatiri, nekuita... uye sezvanga zvichitarisirwa iOS 11 yanga isiri iyo.
Mune reddit tinogona kuwana tambo dzinoverengeka umo matambudziko akasiyana anosangana nevashandisi kana vachinge vaisa iOS 11 anoratidzwa. IOS 11 nyaya dzinokanganisa kushanda kwese kwechigadzirwa, kutora nguva yakareba kuvhura iyo app uye kurodha iyo data, kuvharwa kweapp uye nyaya dzehupenyu hwebhatiri.
Sezvo ini ndakaisa iOS 11, kuvhura kunyorera ibasa rakaoma. Safari, Reddit, ESPN, Yahoo, nezvimwewo vese vane yakanyanya kuvhurika nguva. Pamwe vanoramba vachingovhara pasi, kana ivo vanorembera uye vanoramba vachimanikidza kuti nditangezve iyo app, tisingataure yekukodha nguva. Ini handina kumbobvira ndaita dambudziko neangu iPhone 7 Plus inomhanya iOS 10, asi kubvira pakuvandudza zvinoita senge chishandiso chakanamirwa mufulsand. Ini ndakanga ndisina kumanikidzwa kutangidza foni pamberi pechimwe asi ndakatozviita kaviri mumazuva maviri apfuura.
Vamwe vashandisi vanofunga kuti iyo Twitter, Facebook Messenger kana Safari zvinoshandiswa zvinonyanya kubatwa. Dzimwe nguva havavhure zvakananga uye kana vachidaro mushure menguva diki diki vanorembera pachigadzirwa. Chii chimwe, zviziviso kubva kune izvi zvishandiso hazvishande uye kana zvikaitika, zvinowanzoitika. Zvinetso nehupenyu hwebhatiri uye bluetooth hazvina kusiiwa kunze kwematambudziko ayo vashandisi veIOS 11 vari kutambura futi.
Ini ndagara ndakaisa ese mabetas abuda muIOS 11 uye handisati ndambove nedambudziko, asi kubvira pandakaisa iyo yeGolden Master vhezheni, maapplication akamira kuvhura, anovhara achienderera, anodziya pachiratidziri ... kunyangwe iyo iPhone inomira kupindura zvizere kwemasekondi mashoma. Iyo bluetooth inomira kushanda zvisina kujairika, nzvimbo yekutonga haindibvumidze kuti ndichinje nziyo….
Vamwe vashandisi vanoti nekumisikidza zvese marongero, iwo maapplication adzoka mukushanda zvakajairika. Vamwe vakamanikidzwa kuseta yavo kifaa kubva pakutanga kugadzirisa aya matambudziko. Kuti udzivise aya marudzi ematambudziko, Izvo zvinogara zvichikurudzirwa kuita zero zero yekuisa yega yega vhezheni yeApple iyo Apple inoburitsa pamusika, sezvo matambudziko ekuita angave angave achigadzirwa nechokuvandudzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Vazhinji vashandisi vanogunun'una nezve kusashanda zvakanaka, kunonoka uye matambudziko ebhatiri neIOS 11
Yakaiswa kubva pakutanga pane yechinyakare iPhone 7 uye mashandiro ari sezvingatarisirwa
Unodei? Yakawanda bhatiri uye simba? iOS 11 yakagadzirirwa iyo iPhone 8 uye iPhone X, kwete zvemidziyo yechinyakare.
Pamusoro peiyo Apple inogadziridza iyo terminal unonyunyuta here? Nei iOS yawakatenga iyo yechinyakare iPhone 7? Zvakanaka, kana ukachema zvakanyanya, unowana iOS 10.
Chinhu chekugara uchikuyeuchidza iwe kugadzirisa, matambudziko ekuchengetedza ekare software ... izvo zvatova.
Enda wakadzora inofanirwa kuve yekutarisira kuti OS inongofamba zvakanaka nechazvino chishandiso pamusika. Izvo zvine musoro kukumbira kuti zvifambe zvakanaka zvirinani nedhiyo iri pamusoro pamusoro.
Madremía anowanzoita hunhu iwe anorega kutaura zvisina maturo iyo iPhone 7 ndeyechinyakare mira yekumira kutaura zvisina maturo iwe ndiwe wakajairika-musoro-wakatarwa geek uyo anodzivirira kambani achiti zvisina maturo, uye neruzivo rwako izvi zvinokundikana zviri zvakare mu iPhone 8 kuti kune vanhu vakaita iwe amai vako wakabereka zvakawanda
Iphone 7 Plus Penultima beta kune yegoridhe tenzi pasina dambudziko uye vhudzi rakaiswa paIO 10. Pasina matambudziko.
Hongu, ini ndinowanawo shanduko yavakaita muTunes inogumbura, zvakatora zvakapetwa kaviri zvakapetwa kudzoreredza yangu ipad / iphone + backup kupfuura zvayakatora ini ndisati ndambozviita nekopi yemuno pane kurodha pasi zvese kubva muchitoro kaviri. Nenzira, iwe uchiri kugona kudhonza iwo maroni kubva kuPC yako kuenda kune chako chishandiso uchishandisa iTunes, zvakafanana neiyo app, asi ichiri kusanzwisisika kupfuura pakutanga (tisingatauri kuti kana idzi .ipas dzisisiri kuvandudzwa, hazvizo ita chero pfungwa yekuita kudaro).
Ndinoenda ne6s plus uye safari ndiwo mufaro, bhatiri rakafanana, kuti kana ndakave nekuvharwa kusingatarisirwi kwechimwe chikumbiro asi hapana chinondivhundutsa kugunun'una uye ivo vanozora zvishoma nezvishoma
Chekutanga chinhu: anofara muridzi weiyo iPhone 6S pane iOS 9.
Ini handina chandakaona muIOS 10 kana 11 inoti: wow! Ini ndoda kumutsidzira. Ndakatodzidza ne iPhone 4 pavakayiuraya neIOS 7, uye ndikaona iyo iPhone 4S ichifa neIOS 8.
Kunze kwekunge paine chimwe chinhu chinotyisa, ini ndinonamira neIOS iyo iyo iPhone inouya nayo kana kugadzirisa imwezve.
Uye mune yekufungidzira kesi iyo shamwari kana ini yatinoda kugadzirisa, nguva dzose kune vhezheni »iOS x.1 ″, nekuti mhedzisiro yekutanga ndeyechokwadi akatsiga anogadzirisa madhiragi uye anoita kuti zvese zvifambe.
Panguva ino muvhi, iwe unofanirwa kunge watove wakanyanya kudarika kuzivikanwa.
Ini ndinoda kushanyira mawebhusaiti neakadai brainy makomendi kubva kune vashandisi ... sei iyo de-inoshungurudza
sandra guedes akadaro
bvunza, ndine yangu yakasarudzika ringtone kune imwe sms ringtone uye imwe khalendari. Ndakava navo kubva yangu yekutanga iphone 4. Urikuti here kana ndikagadzirisa ndinenge ndisina zvimwe ?? kunyangwe kana ndinavo itunes?
Pindura kune sandra guedes
Mubvunzo; Kana iwe uchinongedzera kune yakachena kumisikidza kudzoreredza iyo terminal uye kutanga kubva ku0, izvi zvakare zvinoreva here kuisa ese maapplication kubva pakutanga uye zvingave zvakakodzera here kuita backup, kuisa iOS 11 kubva pa0 uyezve kudzoreredza backup yatakaita?
Ndinokutendai zvikuru nekukwazisa.
Kana zviri kubva pakutanga haugone kuita backup nekuti izvo zvinokwezva marara awakachengeta.
Unofanira kukopa mafomu rimwe nerimwe
Zvakanaka, pandinokanda iyo iPhone kunze kwehwindo, handigoni kumira kuti yakanonoka sei kuwana nazvo, pamusoro pazvo zvese, ivo vanokuudza kuti haugone kushandisa icloud nenzira imwechete, kuzvidza Apple nekuti chero munhu vakatenga iyo iPhone vakaitenga panguva yavo, zvirinani muma5s inoshamisa M ios 11.